Black Lotus - Ụmụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Nwa Lotus nkezi 3.7 / 5 si 6
NA / A, o nwere ihe nlere 19K
Onye isi ala na-enweghị obi x onye pianist nwere obi ụtọ!
Mgbe afọ atọ nke mgbalị efu gasịrị, ihe niile Wen Nian'nan nwetara bụ anya oyi na ahụ jupụtara na scars.
Mgbe ọ na-ele mgbanaka dị n'aka ya nke na-anọchi anya nkwa a mebiri emebi, iwe were ya.
“Gu Yansheng… Ị chọrọ ịhapụ m ka m laa? Ọ dị mma…”
Wen Nian'nan ji mkparị jụ ya ọnwa ole na ole ka e mesịrị, mgbe Gu Yansheng, bụ́ onye eziokwu tụrụ anya, kpọta ndị nche ya ka ha meghee ụzọ ya.
Kedu otu esi eme ka mgbu dị n'ime ọkpụkpụ kwụsịlata?
Kedu otu esi edozi nghọtahie na-enweghị mgbagha?
Ha abụọ hà ga-enwe ike ịlaghachi n'ihe ha bụbu?
Onye agụụ mmekọahụ na-agụ agụụ Manhwa Hentai
Otu Ọmụmụ Ihe Sunggi - Manhwa Hentai